Bogga ugu weyn Magaalooyinka Ugu Wanaagsan Oo La Awoodi Karo Si Aad U Dhaqaajiso Oo U Bilawdo Nolol Cusub
Isha Sawirka: CEO Magazine World
Weligaa ma jeclaan lahayd inaad riixdo badhanka hakinta nolosha oo aad bilowdo cutub cusub oo aan lahayn cawaaqib? Waa magaalooyin la awoodi karo oo aad u guuri karto. Si kastaba ha ahaatee, Nasiib darro, waqtigu wuxuu ku socdaa xariiq toosan. Waqtigu, dhanka kale, waa dhisme uu aadamigu abuuray.
Si kale u dhig, adiga ayaa mas'uul ka ah jadwalkaaga nolosha, waana inaadan isbarbar dhigin hamigaaga iyo guulahaaga kuwa kale. Intaas waxaa sii dheer, waxay ku anfici doontaa inaad waqti dheer oo adag ku eegto noloshaada si aad u gaarto isha isbeddelka aad rabto inaad aragto. Tixgalinta waxa aad jeceshahay inaad ka beddesho noloshaada ayaa kaa caawin doonta inaad ogaato waxa xiga ee ay tahay inaad sameyso.
Haddaba, su’aashu waxay tahay, sideen ku bilaabi karaa nolol cusub markaan guuro? Midda kale si aad u abuurto nolol cusub, waa inaad marka hore u diyaar garowdaa nolol cusub. Intaa waxaa dheer, Samee doorashadaada. Waxaad bilaabi kartaa nolol cusub si aad isbeddel u samayso. Intaa waxaa dheer, waxaad bilaabi kartaa nolol cusub sababtoo ah waxaad dareemeysaa inaad ku qasban tahay inaad sidaas samayso. Musiibo shaqsiyeed ayaa laga yaabaa inay burburisay gurigaaga, shaqadaada, ama xiriirkaaga.
Intaa waxaa dheer, si kastaba ha ahaatee, ogaanshaha waxa aad ka rabto nolosha waa tallaabada ugu horreysa ee dib u bilaabashada. Marka labaad, tixgeli cawaaqibka. Haddii aad ka fekereyso inaad isbaddallada nolosha ku sameyso, waa fikrad wanaagsan inaad aragto natiijooyinka xulashadaada. Intaa waxaa dheer, way adag tahay in la beddelo isbeddellada nolosha ee muhiimka ah. Tixgeli waxa aad heli doonto iyo waxa kaa lumi doona adiga oo raaca waddo kale. Marka saddexaad waxaad u baahan tahay inaad samayso qorshe cusub. Sidoo kale, waxaad u baahan tahay inaad samirto.
Intaas waxaa sii dheer, tixgeli waxaad u baahan tahay inaad fuliso si aad u gaarto yoolalkaaga oo aad u bilowdo noloshaada cusub. Waa fikrad wanaagsan inaad la fariisato warqad iyo qalin oo aad qorto fikradahaaga. Markaad qiimaynayso oo aad dib u eegayso fikradaha beddelka ah, waxaad u badan tahay inaad marayso dib -u -eegid badan.
Nasiib wanaag, Mareykanka wuxuu leeyahay dhowr magaalo oo cajiib ah oo la awoodi karo oo leh fursado badan oo shaqo, hawo wanaagsan, muuqaal qurux badan, guryo la awoodi karo, iyo waxyaabo badan oo xiiso leh oo la sameeyo. Guuritaanku wuxuu noqon karaa mid ka mid ah dhaqdhaqaaqyadii ugu fiicnaa ee aad waligaa samaysay.
Mid ka mid ah barnaamijyada lacag-celinta ugu fiican waa Ibotta.
Ibotta waxay bixisaa lacag-soo-celin haddii aad dukaanka wax ka dukaameysato, onlayn, ama markaad safrayso ama aad wax ka cunayso. Intaa waxaa dheer, ma jiraan wax koodhadh xayaysiis ah ama rasiidhyo si loola socdo. Waxaad ka raadinaysaa dalabka dalabyada aad jeceshahay, ka dibna ama ku iibso sheyga kaarka daacadnimada ama adoo adeegsanaya barnaamijka kaarka deynta ee la taageeray oo ku dheji sawirka rasiidkaaga ka dib iibsashada, ama ku iibso sheyga kaarka daacadnimada ama barnaamijka oo leh kaarka deynta ee la taageeray. App -ka waxaa laga heli karaa Android iyo IOS labadaba.
Toban Magaalo oo La Awoodi Karo Inay U Guuraan oo Bilaabmaan 2021.
Waxaan fahamsanahay qof kasta oo waligiis rabay inuu dib u bilaabo, alaabtiisa xirto, oo u guuro meel cusub. Intaas waxaa sii dheer, ma jirto waqti ka wanaagsan sidii hadda loo abuuri lahaa bilow cusub iyadoo loo guurayo magaalo cusub. Waxaa jira dhowr magaalo oo la awoodi karo oo aad u guuri karto. Tilmaan -bixiyahan ayaa lafaguri doona tobanka magaalo ee ugu fiican ee aad u guuri karto haddii aad ka fikirayso inaad guurto.
Intaa waxaa dheer, waxaan dooranay 10ka goobood ee ugu sarreeya waddanka oo leh calaamadda “guriga lagu soo dhoweeyo” adiga uun, haddii aad dib u bilaabanayso furriin ka dib, u dhaqaaqayso xirfaddaada, ama aad u baahan tahay isbeddel.
Sidaa darteed, magaalooyinka la awoodi karo waxaa ka mid ah:
Gobolka ugu weyn North Carolina waa Charlotte. Qiyaastii 1.6 milyan oo qof ayaa ku nool magaaladan. Charlotte waa magaalada saddexaad ee ugu koritaanka ugu dhaqsaha badan Mareykanka, sida ay qortay The Seattle Times. Charlotte, North Carolina, waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu wanaagsan ee loo guuro si loo bilaabo nolol cusub. Intaa waxaa dheer, Charlotte, oo markii hore ahayd magaalo yar, waxay si dhaqso ah ugu xuubsiibatay xarun maaliyadeed iyo mid ganacsi oo muhiim u ah Mareykanka.
Intaa waxaa sii dheer, Faa'iidooyinka ugu sarreeya ee u guurista Charlotte waxaa ka mid ah qiimaha canshuuraha guryaha oo ka hooseeya celceliska qaranka, celcelis ahaan qiimaha guriga oo ah $ 175 000, iyo 218 maalmood oo qorrax leh sannadkii. In addCharlotte waxay bixisaa xulashooyin kala duwan, oo leh heer aad u wanaagsan 22.1 boqolkiiba kobaca dhaqaalaha ilaa 2000. Intaa waxaa dheer, Lagama tegi doono haddii aad ku raaxaysato ciyaaraha. Shirkadaha waaweyn ee isboortiga ayaa ugu yeera gurigan magaalada.
Alexandria, Virginia, waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu wanaagsan ee loo guuro si loo bilaabo nolol cusub. Ma jiraan wax garaacaya Alexandria, Virginia, qof kasta oo raba inuu ku noolaado asal ahaan. Intaa waxaa sii dheer, Magaaladan Waqooyiga Virginia (oo sidoo kale loo yaqaan NoVa) waa meel ay ku kulmaan shaqaalaha dowladda Arlington, DC, iyo Baltimore.
Intaa waxaa dheer, in kasta oo ay qaali tahay, goobteeda cajiibka ah (meel u dhow kaymaha, dhul -beereedka, iyo xeebaha) ayaa ka dhigaysa mid qiimo leh. Alexandria sidoo kale waa goob aad u wanaagsan oo loogu talagalay farshaxan -yahannada iyo dadka xiiseeya dhaqanka maadaama ay hoy u tahay dadyow kala duwan oo magaalada ku soo kordhiya cunto aad u fiican, farsamada gacanta, iyo waxyaabo kale.
3. Macbadka, Texas:
Temple, Texas, waa inay ku jirtaa meesha ugu sareysa liiskaaga haddii aad raadinayso magaalo qiimo jaban u guurto. Intaa waxaa dheer, celceliska qiimaha macbudka ee noloshu wuxuu 13% ka hooseeyaa celceliska qaranka halka uu qiyaastii saacad ka socdo Austin.
Intaa waxaa dheer, qiimaha guryaha ee magaaladan aad bay uga yar yihiin magaalooyinka waaweyn ee ku xeeran. Temple, Texas, waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu wanaagsan ee loo guuro si loo bilaabo nolol cusub. Qiimaha hoose ee macbudka maaha mid u sabab ah hoos u dhaca dhaqaalaha.
Intaa waxaa dheer, Macbadka sidoo kale wuxuu leeyahay heerka shaqo la'aanta oo ka hooseeya celceliska qaranka. Xarunta Madadaalada Firaaqada ah iyo Tareenka Wadada-Macbadka iyo Madxafka Dhaxalka waa goobo aad u fiican oo lagu soo booqdo si loogu raaxeeyo macbudka.
Anchorage, oo ah magaalada ugu weyn Alaska, waa meel fiican oo lagu bilaabo qoys. Anchorage wuxuu ka farxin karaa xitaa xiisaha dibadda ee ugu firfircoon ee u dhow kalluumeysiga, barafka, socodka, baaskiilka (iyo in ka badan).
Waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu wanaagsan ee loo guuro si loo bilaabo nolol cusub Plus, marka la barbardhigo magaalooyinka kale ee waaweyn, Anchorage aad buu uga yar yahay ciriiriga iyo dhaqaale ahaan.
Intaa waxaa sii dheer, Way fududahay in la fahmo sababta Anchorage ay macno buuxa u leedahay marka aad tixgeliso dhaxalka hodanka ah ee hodanka ah ee Alaska, quruxda baaxadda leh, quruxda badan, iyo qorrax -dhaca saqda dhexe (waa run!).
Youngstown waxay kuu noqon kartaa guri cusub oo kugu habboon haddii aad dhibaato dhaqaale haysatay oo aad raadinaysay jawi nasasho leh oo leh guryo la awoodi karo si aad dib ugu bilowdo. Intaa waxaa dheer, Youngstown waa magaalo yar oo Ohio ah kuna taal meel u dhow Columbus.
Youngstown, Ohio, waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu wanaagsan ee loo guuro si loo bilaabo nolol cusub. Youngstown waxay leedahay qiimo nololeed oo 73% ka hooseeya celceliska qaranka. Intaas waxaa dheer, daryeelka caafimaadka iyo cuntada ayaa iyaguna ka qaalisan qaybaha kale ee dalka.
Isboortiga xirfadda leh iyo kuwa xirfadda leh ayaa muddo dheer qayb ka ahaa dhaqanka Youngstown. Magaaladan, baseball -ku waa isboorti casri ah. Si kastaba ha noqotee, Youngstown Indians, Youngstown Ohio Works, iyo Youngstown Browns waa naadiyada baseball -ka ugu caansan. Greg Richardson, Harry Arroyo, Kelly Pavlik, iyo Ray Mancini ayaa dhamaantood ah horyaalkii feerka ee ka yimid aagga Youngstown.
Haa, Boston waxay leedahay taariikh hodan ah oo soo bilaabatay 1630, oo ay kujirto sheekada xiisaha leh ee Paul Revere (iyo Xisbiga Shaaha Boston ee caanka ah), laakiin waxay leedahay wax badan oo ay ku siiso dadka cusub. Waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu wanaagsan ee loo guuro si loo bilaabo nolol cusub. Intaa waxaa dheer, Xaruntani Xeebta -Bari waxay leedahay dhammaanteed. Laga soo bilaabo cunnooyinka abaalmarinta ku guuleysta (chowder clam iyo rollers rollers, si aan u magacowno dhowr) ilaa fursado badan oo xirfadeed iyada oo ay ugu mahadcelinayaan shirkadaha kala duwan ee dawooyinka iyo farsamada.
Caasimada gobolka Tennessee waa Memphis. Iyada oo leh 655,555 qof, waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu dadka badan Mareykanka Memphis, Tennessee, waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu wanaagsan ee loo guuro si loo bilaabo nolol cusub. Magaaladan, si kastaba ha ahaatee, ma haysato qiimaha saxda ah ee sarreeya sida magaalooyinka waaweyn.
Tani maahan waxa dadka badankiisu ka filayaan magaalo -weyn. Marka la barbar dhigo qiimaha guryaha ee magaalooyinka kale ee waaweyn, Memphis waxay leedahay qiimo nololeed oo aad u hooseeya.
Intaa waxaa dheer, Memphis waxay hoy u tahay kulliyado iyo jaamacado kala duwan. Waxay kaloo xaruntoodu tahay AutoZone iyo FedEx International Paper halkaas (shirkadaha Fortune 500).
Memphis waxay hoy u tahay Memphis Grizzle -ka NBA -da iyo Mississippi Riverkings ee Koonfur -Bari Xirfadlaha Hockey League. Waxaa jira kooxo badan oo kala duwan, horyaal, iyo dhacdooyin isboorti si loogu xafido taageerayaasha isboortiga Memphis.
Ku noolaanshaha riyada Ameerika waa dhacdo joogto ah Carlsbad, California. Magaaladan Koonfurta California, oo ka soo horjeedda Xeebta Baasifigga ee cajiibka ah, ayaa loo aqoonsaday inay tahay janada surfer -ka iyo sidoo kale goob -dhaqameed. Carlsbad, California, waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu wanaagsan ee loo guuro si loo bilaabo nolol cusub.
Intaa waxaa sii dheer, in ka badan saddex iyo toban mashruuc oo farshaxanka waddooyinka ah, oo ay ku jiraan sawirro, farshaxanno, iyo in ka badan, ayaa laga heli karaa agagaarka Carlsbad. Intaa waxaa sii dheer, way adag tahay inaadan dareemin inaad ku socotid qorraxda Carlsbad, oo waddo gaaban u aadda San Diego, oo ah hoy cuntooyin cajiib ah, iyo heerkul celcelis ahaan 70 -meeyadii hoose.
9. Magaalada Kansas, Missouri:
Kansas waa meel kale oo qurux badan oo laga bilaabo haddii aad raadinayso bilow cusub. Magaalada Kansas waxay leedahay qiimo macquul ah oo lagu noolaado. Kansas City, Missouri, waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu wanaagsan ee loo guuro si loo bilaabo nolol cusub.
In kasta oo canshuurta iibku ay tahay kaliya 7.73 boqolkiiba, canshuurta dakhligu waa kaliya 6%. Qiimaha dhexdhexaadka ah ee hantidu waa $ 162,000, kirada dhexdhexaadka ahna waa $ 725. Dhammaan kharashyada ayaa ka hooseeya celceliska qaranka. Magaaladan waxaa loo tixgeliyey inay tahay tan sagaalaad ee ugu wanaagsan dadka waayeelka ah.
Intaa waxaa sii dheer, tan waxaa sabab u ah cimilada wanaagsan iyo qiimaha nolosha oo aan qaali ahayn. Kansas City Royals, Taliyayaasha Magaalada Kansas (National Football League), iyo Sporting Kansas City ayaa ka mid ah naadiyada waaweyn ee isboortiga ee fadhigoodu yahay Kansas City, Missouri (Major League Soccer). Intaa waxaa dheer, Google wuxuu damacsan yahay inuu geeyo internet xawaare sare leh.
Kani waa magaalo yar oo ku taal gobolka koonfur -galbeed ee Colorado. Pueblo waxay leedahay qiimo nololeed ka jaban 16.6% marka loo eego celceliska qaranka. Pueblo, Colorado, waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu wanaagsan ee loo guuro si loo bilaabo nolol cusub. Ku darista Kirada billaha ah waxay 23% ka hooseysaa celceliska qaranka. Tani waxay ka dhigeysaa meel aad u fiican oo aad ugu guurto haddii aad raadineyso inaad yareyso kharashaadkaaga nolosha.
Gabagabadii, markaad tixgeliso sawirka weyn ee noloshaada, ogow waxaad neceb tahay, dejiso istaraatijiyad lagu hagaajinayo, oo qaado tallaabo adag. Gelitaanka mid ka mid ah magaalooyinkan la awoodi karo ayaa ku siin kara boodka aad u baahan tahay.
Intaas waxaa sii dheer, waxaad haysataa hal xabbad oo keliya nolosha nolosha marka la eego shuruudahaaga (oo aan ognahay, ugu yaraan). Waxaa jira magaalooyin la awoodi karo oo aad u guuri kartid. Waxaad horay u haysatay wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u gaarto guusha aad rabto nolosha; waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso hadda waa inaad gaadho oo aad hesho.
Miyaan awoodi karaa inaan si raaxo leh ugu noolaado halkaas?
Ha ka fikirin oo kaliya inaad awoodi kartid inaad awoodid. Waxaa liiskeena ku yaal dhowr magaalo oo la awoodi karo in loo guuro. Si kastaba ha ahaatee, baar xaaladdaada maaliyadeed si aad u ogaato haddii aad si raaxo leh ugu noolaan karto halkaas. Si kale haddii loo dhigo, ma awoodi kartaa inaad si raaxo leh ugu noolaato magaalada (ama meelaha) aad rabto inaad degto? Kahor intaadan qorsheyn guuritaan, ka fiirso qiimaha maciishadda iyo hantida ma guurtada ah, kharashyada billaha ah, iyo dakhliga billaha ah. Intaa waxaa dheer, maskaxda ku hay in dadka deggan magaalo qiimo leh (ama mid leh nolol qaali ah) laga yaabo inay kasbadaan bil kasta wax ka badan celceliska.
Waa maxay fursadaha u bannaan xirfadleyda?
Markaad u guurto magaalo cusub, waxay kaa caawinaysaa inaad yeelato shabakad dad kaa caawin kara bilowga. Intaas waxaa sii dheer, ka hubso rugta ganacsiga ee xaafaddaada si aad u ogaato inay jiraan koox xirfadlayaal dhallinyaro ah. Intaa waxaa sii dheer, marka ay timaado soo dhaweynta xirfadleyda dhallinyarada ah, meelaha qaarkood way heer sare yihiin.
Waa sidee daryeelka caafimaadku?
Mid ka mid ah tixgelinta muhiimka ah marka la go'aaminayo meesha loo guurayo waa tayada daryeelka caafimaad ee la heli karo. Intaa waxaa sii dheer, ka hor intaadan u guurin magaalo ama gobol cusub, dhammaan aagagga daryeelka caafimaadka waa in la qiimeeyaa, laga bilaabo bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka (sida tayada dhakhaatiirta iyo dhakhaatiirta) ilaa xarumaha daryeelka caafimaadka (sida isbitaallada iyo xafiisyada caafimaadka). Intaa waxaa dheer, ha ilaawin inaad ka fikirto shuruudahaaga daryeelka caafimaad ee gaarka ah.
Waa imisa canshuurta hantida iyo khidmadaha HOA?
In kasta oo laga yaabo inaad dareen macquul ah ka qabto celceliska kirada ama qiimaha kirada guriga meel cayiman, hal talaabo hore u soco oo fiiri canshuuraha hantida iyo khidmadaha HOA si aad u hesho sawir sax ah oo ku saabsan qiimaha noloshaada. Intaa waxaa dheer, waxaad isticmaali kartaa xisaabiye online ah si aad u xisaabiso canshuuraha hantida meel gaar ah.
Goorma ayay tahay waqtiga ugu fiican sannadka in la guuro?
Ijaarku wuu kala duwan yahay iyadoo ku xiran waqtiga sannadka meelo kala duwan iyo suuqyada guryaha. Intaas waxaa sii dheer, waxay ku caawin doontaa haddii aad adigu waqti badan siiso si aad guri u raadsato, maadaama taariikhaha soo-guuritaanka mulkiilahaagu uusan u ekaan karin sidaad rabto. Markaad qorshaynayso guuritaankaaga, weydii hareerahaaga oo xoogaa cilmi -baaris ah ku samee internetka -oo maskaxda ku hay cimilada xun.
15 Magaalooyinka Ugu Qiimaha Badan Aduunka Oo Lagu Noolaan Karo
Magaalooyinka Ugu Wanaagsan In La Maal -geliyo Hantida Ma -guurtada Ah
Sida Loo Maalgeliyo Airbnb
Wicitaanada Vs: Waa maxay Farqiga iyo Isku ekaanshaha 2021